Askari AMISOM ah oo dhintaqy isagoo aalad qaraxda ka saaraya Dayniile - Sabahionline.com
Askari AMISOM ah oo dhintaqy isagoo aalad qaraxda ka saaraya Dayniile
Maarso 06, 2012
Askari kuwa ciidamada Midowga Afrika ayaa Isniintii (5-ta March) degmada Dayniile ku dhintay mid kalena waa uu dhaawacmay ka dib markii ay ku qaraxday miino la macmalay oo ay xabaaleen dagaalyahaniinta al-Shabaab, AMISOM ayaa sidaa sheegtay. Qodobbo la xiriira
AMISOM oo ballaarinaysa hawlgalladeeda Soomaaliya
AMISOM oo cudurdaar ka bixisay shil gaari
Iyadoo miinada laga saarayey tuulada T-da oo ku taal waqooyiga galbeed ee Muqdisho, sifo qarxiyaha looga saaro si ammaan ah, ayay al-Shabaabku sheedda ka qarxiyeen, sidaasna ku dishey askari reer Burundi ah. Taliyaha ciidamada AMISOM, Jeneraal Fred Mugisha ayaa weerarka cambaareeyey. “Waannu sii wadaynaa in aannu la dagaallanno xag-jiriintan shaqada ka dhigtay in ay qalalaase la beegsadaan dadka aan waxba galabsan ee rayidka ah,” ayuu yiri. “Dadka Soomaaliya ayaa dhinaceenna soo jira, iyagaana soo sheegay ilaa 70% ka mid ah miinooyinka la xabaalay oo aannu hawl-gabinnay oo meeshii ka saarray.” "Waxaan ku dhiirri-gelinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee nabadda jecel in ay digtoonaadaan oo ay soo sheegaan wixii falal ah oo ay ka shakiyaan ama alaabihii ay ku arkaan aagaggooda,” ayuu yiri. Ma jeclaysatay maqaalkan?